किशोरावस्था मा टर्की को तथाकथित आयु बेजिया
किशोरावस्थामा टर्कीको तथाकथित उमेर
मारिया जोस रोल्डन | 02/07/2021 22:00 | किशोर
बच्चा हुर्काउन सजिलो वा सजिलो छैन भन्ने तथ्यलाई कसैले पनि विरोध गर्दैन। जीवनका सबै चरणहरू जटिल हुन्छन्, यद्यपि एक जुन कुनै शंका बिना केक लिन्छ एक किशोरावस्था नै हो। यो दुबै आमाबाबु र युवाहरूका लागि जीवनको एक जटिल चरण हो जुन यी परिवर्तनहरू भोग्छन्।
यो अक्सर एक बोलचाल तरिकामा भनिन्छ कि यो टर्की को युग हो यद्यपि यो कथन सबै भन्दा धेरै सही छैन। अर्को लेखमा हामी तपाईंलाई किशोरावस्थाको जटिल संसारको वरिपरि रहेका विभिन्न लेबलहरू र स्टिरियोटाइपहरूको बारेमा थोरै जानकारी दिनेछौं।
1 किशोरावस्था लेबल र स्टिरियोटाइपहरूको समय हो
2 युवावस्था किन ठूलो समय हो?
किशोरावस्था लेबल र स्टिरियोटाइपहरूको समय हो
जस्तो कि हामीले पहिले नै भनें, किशोरावस्था सबैभन्दा जटिल अवस्था हो जुन कुनै पनि व्यक्तिले गुज्रनुपर्दछ। शारीरिक र भावनात्मक परिवर्तन स्पष्ट भन्दा बढी हो र धेरै युवाहरू सबै पक्षहरूमा एकदम चिड़चिलो हुन्छन्। किशोरावस्थाको बारेमा स्टेरियोटाइपहरू र लेबलहरू दिनको उज्यालोमा छन् र यसले किशोर-किशोरीहरूलाई आफैंमा मन पराउँदैन।
यो किशोरावस्थाको अवस्थासँग सम्बन्धित हुन सक्दैन ड्रग्स, रक्सी, पार्टीहरू, अनादर वा हिंसाको साथ। युवा मानिसहरू त्यो भन्दा धेरै छन्, के हुन्छ यो जीवनको एक बरु जटिल चरण र धेरै परिवर्तनहरू हुन्छन्।
यो दिईएको छ, त्यहाँ धेरै अभिभावकहरु छन् जो किशोरावस्थाको अघि भन्दा नराम्रोसँग डर गर्छन्। आजको समाजमा सब भन्दा व्यापक वाक्यांश मध्ये एक बच्चा किशोरावस्थामा पुग्दा पूर्ण टर्की युग मा छ। यो जीवनको यस चरणलाई परिभाषित गर्दा प्रयोग हुने थुप्रै लेबलहरू मध्ये एक हो।
सत्य यो हो कि टर्कीको माथि उल्लिखित युगको प्रकारका रूखहरू प्रयोग गर्ने तथ्यले आफ्नो व्यक्तित्व बनाउन प्रयास गर्ने जवान मानिसलाई कुनै प्रकारको फाइदा गर्दैन। वयस्क बन्नको लागि।
युवावस्था किन ठूलो समय हो?
आमाबाबुले उनीहरूको बच्चा बच्चाबाट किशोरावस्थामा जान्छ भन्ने कुराको बारेमा केही असुरक्षा देखाउँदा यो सामान्य कुरा हो। तर यो एक शीर्ष छैन त्यसैले युवा व्यक्तिमा विभिन्न लेबलहरू राख्न सकिन्छ। यसमा कुनै श is्का छैन कि युवा व्यक्तिहरु शारीरिक र मानसिक दुबै महत्वपूर्ण परिवर्तनको श्रृंखला को लागी जाँदैछन्। तर यस्ता परिवर्तनहरू न त आमा वा बुबा वा आफैले युवा व्यक्तिको लागि नराम्रो नै हो न त नकारात्मक नै। तसर्थ, सबै क्लिचहरू हटाउनु महत्त्वपूर्ण छ र किशोरावस्थाको लेबलहरू जस्तै लोकप्रिय वाक्यांश: "यो बच्चा टर्कीको उमेरको हो"
किशोरावस्थाको अवस्था एक अद्वितीय र अपरिवर्तनीय पल हुनुपर्दछ जुन युवाहरू १००% बाँच्नुपर्दछ।। उनीहरूसँग भएका फरक स्टेरियोटाइपहरूले फरक पार्दैन, किनकि यो मुख्यतया आमा बुबा र पेशेवरहरूमा निर्भर गर्दछ कि युवाहरूले आफ्ना सबै क्षमता र सीपहरूको फाइदा लिन सक्दछन् र वयस्क बन्न सक्छन् जुन उनीहरूको लागि लायक छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » मद्रेस » किशोर » किशोरावस्थामा टर्कीको तथाकथित उमेर
दिगो आहारको लागि कुञ्जीहरू
अनुकरण काठ फर्श: तिनीहरू किन यति लोकप्रिय छन्?